မင်းဂွတ်သီး ဘတ်၁၀၀ ဖိုး( မြန်မာငွေ ကျပ်ငါးထောင်ဖိုးဖြင့်) တံတားဦး လေဆိပ်တွင် စစ်ဆေး ခံဝန်လက်မှတ် ထိုးရခြင်း – Wun Yan
(ကျေးဇူးပြု၍ရှယ်ပေးကြပါ အောက်ခြ ပြည်သူလူထု ဘယ်လောက်ထိ အကျစ်ခံအရစ်ခံနေရသလဲဆိုတာ အများသိနိုင်ဖို့ပါ)
မနေ့က ဘန်ကောက်လေကြောင်နဲ့ ပြန်လာတယ် ၆နာရီ၂၅ မိနစ်မှာမန်းလေးလေဆိပ်ရောက် ပစ္စည်းတွေ လုံခြုံရေးစက်ဖြတ်ပါတယ် အဲဒီမှာပြဿနာစတာပါဘဲ
စက်နားမှာစုထိုင်နေတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်အမျိုးသမီးက ဂျပ်ဘူးထဲကဘာတွေလဲမေးပါတယ် မင်းဂွတ်သီးပါလို့ပြောလိုက်တယ် မင်းဂွတ်သီးတဲ့ မင်းဂွတ်သီးဆိုစစ်ရမယ်လို့ အလားတူယူနီဖောင်ဝတ်လူကိုလှမ်းပြောတယ် မျက်နှာတွေက အထက်စီးက ရုပ်တွေနဲ့ပေါ့ စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားပေမဲ့ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တယ် ဂျပ်ဖာကြိုးတွေဆွဲဖြုတ်ဖွင့်တယ် ပီးတော့ ဒီတိုင်းစစ်လုိ့မရဘူး ဒါးနဲ့လှီးစစ်ရအုံးမယ် ပိုး/ဖိုးပါမပါတဲ့
ကျမဟာ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တာဝန်အရစစ်ဆေးခြင်းက်ိုကြည်ဖြူနိုင်ပေမဲ့တာဝန်အရထက်ပိုတာကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှ ဘယ်အချိန်မှလက်မခံနိုင်သူပါ ဒီတော့ ဘာကြောင့်စစ်မှာလဲ မင်းဂွတ်သီးကတားမြစ်ကုန်လားဆိုတော့ သူတို့ animal & plant quanrantine ကတဲ့ နိုင်ငံခြားကအသီးအနှံမှာပိုးပါရင်အခြားအသီအနှံတွေ ကူးစက်မှာမို့တဲ့
ကျမအိမ်မှာကျမစားမဲ့ဘတ်တရာဖိုးဘဲရှိတဲ့ ဒီ အသီးလေးဟာ စစ်ဆေးစရာပမာဏမဟုတ် ကွန်တိန်နာနဲ့သယ်လာတဲ့ရောင်းစားရန်ပမာဏလဲမဟုတ်(ကွန်တိန်နာနဲ့သယ်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ ကျမလိုဖြစ်မယ်မထင်) ကျမစားပြီးအခွံကိုလဲစည်ပင်သာယာအမှိုက်ကားနဲ့သယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကူးစက်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပေမဲ့ လက်မခံ ဒီတော့ကျမဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ကြောင်းပြောသော်လည်းအခန်းထဲလိုက်ခဲ့ စာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ အိမ်လိပ်စာရေး ပါ စုံလို့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့form ကိုဖြည့်ခိုင်းပါတယ်
ကျမက နိုင်ငံခြားကဒီလိုအသီးဝယ်လာရင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်မှာကြေငြာထားလဲဆိုတော့ သူတို့ ဝက်ဆိုက်မှာတဲ့ ပြည်သူတိုင်းအင်တာနက်မသုံးတတ်သလို ဝန်ကြီးဌာနweb site ကိုတော်ရုံလူမကြည့်ပါ သက်ကယ်ခြောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတာပါ
အဲဒီအချိန်မှာ ကျမဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ ခံပြင်းဒေါသနဲ့အတူ ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုကိုခံစားရပါတယ် ကျမကို တာဝန်ထက်ပိုပြီးရစ်ကြကျစ်ကြတာပါ နယ်ကလာတဲ့သူဆို ကြောက်ပြီး မင်းဂွတ်သီးတွေထားခဲ့မှာပါ ကျမကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်မဟုတ်ရင်နဲနဲမှမခံတတ်လေတာ့အခြေအတင်ဖြစ်ပါတယ်
ကျမတို့ကိုသာလုံခြုံရေးစက်ဖြတ်စေပေမဲ့ရှေ့ကလူ၂ယောက်စက်မဖြတ်တာဘာကြောင့်မပြောသလဲ? အခြားသူများကိုရောဘာကြောင့်မစစ်ဆေးသလဲ:? ကျမ အမ လဲမင်းဂွတ်သီးဝယ်လာပြီးအဝတ်အိပ်ထဲထည့် စက်ဖြတ်ပါတယ် ဘာမှမပြောပါ?
Custom လို့ယူဆရတဲ့ယူနီးဖောင်းဝတ်မက မျက်လုံးမှေးစင်း ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး ရှင်မဆိုင်တာတွေမပြောနဲ့ လုပ်တဲ့လူကိုပြောတဲ့
နှရစ်နဲ့ရဲက လူအများနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာမှားခြင်မှားမှာပေါ့တဲ့ (မေးလိုက်ခြင်တာ ဘယ်လိုအမှားလဲဖကကတဆ အမှားမျိုးလားလို့) အုပ်စုလိုက်ဝိုင်းဟောက်တာ သာမာန်ပြည်သူဆိုတော့ ရစ်ခြင်
ဒီစာမရေးခင်သေခြာခြင်လို့ စိုက်ပျိုးရေးကလောလောလတ်လတ် ပင်စင်ယူထားသူ အရာရှိကိုအတည်ပြုတော့ အဲဒီလိုစစ်တတ်ပေမဲ့ ခုလိုအိမ်စားအသေးအမွှားမစစ် trade လောက်မှစစ်ပါတယ်တဲ့
ကဲရှင်းကြပါပီလား အဖြစ်အပျက်ကို အချို့ဝန်ထမ်းများယခုချိန်ထိပြည်သူလူထုကို တာဝန်အလွဲသုံးစာလုပ်ပြီး ဟောက်စားငေါက်စားလုပ်နေတာကို ဒီလိုဘဲလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာလား?
(ဒီစာက်ိုရေးသူကျမဟာ ကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆဲဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားက မန်းလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှဝန်ကြီးတဦးဖြစ်ပြီး ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကိုပါတဝန်ယူနေရသူပါ)
ကျမပုဂ္ဂိုရေးတွေပြောနေတာမဟုတ် system errorကိုပြောနေတာပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေဆက်စပ်စဉ်းစားမိတာကတော့
၁ – ဒီလေဆိပ်ကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်တာလဲ
၂ – သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးကစီမံခနန့်ခွဲခွင့်မရှိဘူးလား
၃ – ခုလိုပြည်သူတွေရဲ့complaint mechanism ကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူဖြေရှင်းမှာလဲ
၄ – ဒီဝန်ထမ်းဆိုးတွေကိုဘယ်သူက အရေးယူဖြေရှင်မှာလဲ
၅ – အဆုံးမတော what is decentraluzation ? ပါ
ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကဘဲစီမံခွင့်ရှိရင် ဒီလိုလူတွေကအနီးမှာရှိတဲ့ဒေသန္တရအစိုးကို မျက်စိထဲတောင်မထဲ့တော့ပါ
ကျမရေဆုံးရေဖြားသွားပါမယ်ခေတ်အဆက်ဆက်မတရားတာကိုနိုင်သလောက် တိုက်ခဲ့သူမို့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းကာမှ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေရမယ်ဆိုတာ အရပ်ရပ်နေပြည်တော်ကြားလို့မှမတော်ပါ
ပြည်ထောင်စုအထိတိုင်ပါမယ် ဝကခကိုလဲတိုင်ပါမယ် ရှေ့နေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတရားစွဲလို့ရရင်လဲစွဲပါမယ် လိုအပ်ရင်သတ်းစာရှင်းလင်းပွဲလဲလုပ်ပါမယ် ဖြေးဖြေးခြင်သွးမှာပါ
အခြေခံပြည်သူလူထု ယူနီဖောင်းမြင်တိုင်းကြောက်မနေရစေဖို့ တတ်နိုင်တာလုပ်ပါမယ်
Source : Khin Moe Moe Oo